ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7Your Mind မှုတ်တော်မူမည်ဒါက sex အမှန်တရားများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 14 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
လိင်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အသိနဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုရှိသည်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကယ့် sex အကြောင်းအရာကိုသိကြပါ? ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ orgasms ပတ်သက်. အဘယ်သို့သိကြပါ, လိင်တံအရွယ်အစား, နှင့် sexercise? ကျနော်တို့၏စာရင်းပြုစုထားသောပါပြီ7ရိုသေလေးမြတ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနှင့်ချစ်သူများချန်ထားမည်မှာအံ့သြစရာအချက်အလက်များ.
အချက်အလက် #1: သည့်အခါများစိုက်ထူ, ပျမ်းမျှလိင်တံအရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်5သို့ 5.7 ရှည်လျားလက်မ
လေ့လာမှု၏ပဲရစ်ရဲ့အမျိုးသားအကယ်ဒမီပြုမကြာသေးမီကလေ့လာချက်များအရ, အများဆုံးယောက်ျားတွေအတိုင်းထက်အလွန်5သို့ 5.7 လက်မရှည် 3.9 သို့ 4.1 ကိုနှိုးဆွပေးပြီးသည့်အခါပတ်ပတ်လည်. လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်မှဒါဆန့်ကျင်, အများစုကိုအမျိုးသားတွေတစ်ဦးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး7လက်မလိင်တံ.
အချက်အလက် #2: အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အင်္ဂါဇာတ်ကအမှန်တကယ်ဖြန့်ကိုနှိုးဆွပေးပြီးသည့်အခါ
ပျမ်းမျှအားမလိင်အင်္ဂါပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်3သို့4ရှည်လျားလက်မ. ကိုနှိုးဆွပေးပြီးသည့်အခါကတကယ်မနှစ်ရာရာခိုင်နှုန်းအထိချဲ့ထွင်နိုင်, သုတေသနပြုချက်အရ. ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဒါ, အရွယ်အစားကအမှန်တကယ်အရေးမပါဘူး.
အချက်အလက် #3: အမျိုးသမီးရေးရာရဲ့ခံစားရတဲ့ orgasms အထိကြာရှည်နိုင်4လူကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာဆ
ပျမ်းမျှအားအထီးအော်ဂဇင်အကြောင်းကိုကြာရှည်ခံသည်6စက္ကန့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အကြောင်းကိုကြာရှည်ခံနေစဉ် 20.
အချက်အလက် #4: လိင်၏သုံးဆယ်မိနစ်မီးလောင်ကူညီပေးပါမည် 200 ကယ်လိုရီ
အချင်းမိန်းမရဲ့ Day ကို Magazine တွင်ထုတ်ဝေသည့်ဆောင်းပါး၏အဆိုအရ, လိင် High-ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်. key ကိုလိင်ပူပါစေနှင့်တာရှည်ခံရန်ဖြစ်သည်. သက်ပြင်းနှင့်ညည်းတွားနောက်ထပ်ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ကိုကူညီနိုင်. အခြားသောနည်းလမ်းရာထူးတက်အကူးအပြောင်းနှင့်ပင်ရာထူးကားရန်ဖြစ်သည်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်ထိပ်ပေါ်မှာမှန်လျှင်တစ်ဦးသည်ဝမ်း dancer ကဲ့သို့သင်၏တင်ပါးရွေ့လျားကြိုးစား. ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်းလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တစ်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်သောမိန်းမတို့ကိုပိုပြီးကယ်လိုရီကိုမီးရှို့လေ့ရှိကြောင်းပြော.
အချက်အလက် #5: ယောက်ျားကိုအော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းသုတ်ရည်လွှတ်မှု၏ပျမ်းမျှမြန်နှုန်းတစ်နာရီနှစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်မိုင်
Speed​​y နတ်ဆိုးများ; သို့သော်, သုက်ပိုးလိင်အင်္ဂါအဝင်စားတစ်ချိန်ကသူတို့အကြီးအကျယ်နှေးကွေး. ဒါဟာသုက်ပိုးကြာ5အစေမိနစ်6သားအိမ်ခေါင်းရောက်ရှိဖို့လက်မခရီးစဉ်. ဒါဟာအစမှတက်သုတ်ပိုးယူနိုင်ပါသည် 72 ကြက်ဥကိုရှာနာရီ, Mark Elliot သည်နှင့်အညီ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာန၏ညွှန်ကြားရေးမှူး.
အချက်အလက် #6: ရိုးရှင်းရာထူးအမြင့်ဆုံးမှာပြင်းထန်သောခံစားရတဲ့ orgasms ပေး
သင်ကစိတ်လာသည်ကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, အခြေခံမှအိပ်ရာ-rattling အော်ဂဇင်ချောင်းကို. လိင်ပညာပေး Dorian Solot အဆိုအရ, အသစ်ကြိုးစားနေသောအခါ, ပိုမိုရှုပ်ထွေးရာထူး, သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်အမှန်တကယ်လိင်ယှဉ်ဟန်ချက်ညီရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေပေါ်. အစဉ်အလာလိင်ရာထူးအနည်းငယ်ပြုပြင်မွန်းမံခြင်းနှင့်အတူ, သင်သည်ထိုသူတို့ ပို. ပင်အော်ဂဇင်စေနိုင်သည်.
အချက်အလက် #7: ယောဂ arousal တိုးမြှင့်ဖို့ကိုကူညီနိုင်, ခံစားရတဲ့ orgasms, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှု
ဂရိတ်လိင်အဆုံးစွန်စိတ်ကိုကိုယ်ထည်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါယောဂဖြစ်သည်. မသာယောဂတို့သည်ကြီးစွာသောစိတ်ဖိစီးမှုအခဲပျောက်ဆေးဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့တချို့ရာထူးကိုယ်ဟန်အနေအထားတိုးတက်ကောင်းမွန်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, သွေးစီးဆင်းမှု, နှင့်သင်၏နှလုံးဖွင့်လှစ် – ပူပြင်းတဲ့လိင်အသက်အဘို့အလုံးကိုအကြီးအ. ယောဂလည်းပစ္စုပ္ပန်၌သတိသမ္ပနှင့်လူနေမှုသင်ပေးဖို့ကူညီပေးပါတယ်, ကြီးမြတ်လိင်သို့ကောင်းမွန်သောလိင်ဖွင့်အထောက်အကူပြုနှစ်ခုအခြားအမှုအရာ.